मुग्लानी खबर आइतबार, माघ २, २०७८
इलामको माईबेनीमा धुमधामका साथ मकर मेला लागेको छ । माई र जोगमाई खोलाको दोभानमा पर्ने माईबेनीमा परम्परागत रुपमा लाग्दै आएको बेनी मेला यस वर्ष पनि धुमधामका साथ लागेको हो ।
तीन दिनअघि देखि नै माईजोगमाई दोभानमा टहरा निर्माण भएर मेला सुरु भएको हो । विशेष गरेर यही माघ १ गते मकर नुहाउने र पाठपूजा गर्ने धर्मावलम्बीहरुको भीडभाड लाग्ने गर्दछ । मेला आज दिनभर नै लाग्ने जनाइएको छ ।
माईखोलामा स्नान गर्दा सबै पाप हरण हुने र नजिकै रहेको मन्दिरमा पूजाआजा गर्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक आस्था रहेको छ । इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकामा पर्ने बेनीमा नेपालका विभिन्न ठाउँ तथा भारतबाट समेत भक्तजनहरु आउने गरेका छन् ।
मेलामा स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुका साथै बजारमा तामा, प्लास्टिक लगायतका विभिन्न वस्तुहरु समेत बेच्न राखिएको हुन्छ । विशेषगरी स्थानीयवासीले उत्पादन गरेको रसिलो उखु, सुन्तला, तरुलको अत्यधिक व्यापार भएको छ । सो स्थानमा मेला लगाउने कार्य तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाको पालादेखि सुरु भएको पाइन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २, २०७८, ०८:३६:००
चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने गृहमन्त्रीको आश्वासन
जम्बुलिङ फिल्मस् प्रा. लि. को बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
नयाँबर्षको सेलिब्रेसन उद्घाटन काठमाडौं टुँडिखेलमा उपराष्ट्रपतीबाट हुँदै
पल शाहविरुद्ध तनहुँ अदालतमा मुद्दा दर्ता
राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको बैठक जेठ १३ गते ३० मिनेट पहिले